Maxay tahay sababta askarta Soomaaliyeed loo geeyay Itoobiya? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay tahay sababta askarta Soomaaliyeed loo geeyay Itoobiya?
Dalka dhaca geeska Africa ee Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa ka badbaaday shirqool ay maleegeen, Abiy Ahmed, Farmaajo iyo Isaias Afwerki, kaas oo la doonayay in lagu la dagaalamo dimuqraadiyadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Go'aanka dhalinyarada Soomaaliyeed loogu diray inay ka dagaallamaan gobolka Tigreega ee Itoobiya, wuxuu qayb ka ahaa istiraatiijiyad lagu abuurayay ciidan isku dhaf ah oo ka kooban Ereteriya, Itoobiya iyo Soomaaliya, kuwaas oo shaqadoodu tahay xakameynta mucaaradka ka dhanka ah hoggaamiyeyaasha saddexda dal.
Tusaale ahaan, wax ka yar bil, ka hor bilowgii duullaanka milatari ee ka dhanka ahaa TPLF, Farmaajo wuxuu ka degay Eriteriya, kadib, kalgii taliyaha Ereteriya, Isaias Afwerki, wuxuu isla maalmahaas u safray Itoobiya, waxaana xigay kulan qarsoodi ah oo Addis Ababa ku dhexmaray taliyayaasha sirdoonka ee seddex waddan.
Warbixinno lagu kalsoonaan karo oo soo baxaya ayaa sheegaya in geeska Afrika uu ka badbaaday shirqool loo maleegay, kaas oo wiiqi lahaa xasilloonida Gobolka ee aan hadaba xooganeyn, iyadoo lagu hoos gambanayo is-dhexgal dhaqaale.
Farmaajo waxaa laga dhaadhicayay in ciidamada isku dhafka ah ee Saddexda waddan soo gaari doonaan Muqdisho, kadib marka uu soo gabagaboobo dagaalka Itoobiya, si kursiga uu ugu sii fadhiyo, waana sababta uu dhalinyarada uga qeyb galaiyay dagaalka Itoobiya.
Nasiib-wanaag dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega, ayaa fashiliyey shirqoolkii ka dhanka ahaa dimuqraadiyadda ee ay maleegeen Abiy Ahmed, Farmaajo iyo Isaias Afwerki.